FlyBra - एक स्टाइलिश अदृश्य ब्रा | सौन्दर्य समीक्षा
FlyBra - एक स्टाइलिश अदृश्य ब्रा
अन्तमा, एक अदृश्य ब्रा, जुन हरेक महिलाले सपना देखी, सिर्जना गरिएको छ। फ्रान्सेली आकर्षण जापानी गुण र प्रविधिको साथ मर्ज गरियो, र नतिजा फ्लाइब्रा हो! यो उदाउँदो सूर्य को देशबाट फ्रान्सेली फेशन डिजाइनर र ईन्जिनियरहरूको संयुक्त प्रयासको परिणाम हो।
संसारभरिका केटीहरू त्यस्तो प्रकारको सिलिकॉन ब्राको लागि पर्खिरहेका छन्। त्यहाँ धेरै पोशाक र शैलीहरू छन् जसलाई सुन्दर स्तनको आकार चाहिन्छ, तर पट्टिहरू र नियमित ब्राको पछाडि पूरै हेराई ध्वस्त पार्न सक्छ। Fly Bra हल्का, अदृश्य छ, छालासँग राम्रोसँग टाँसिरहनु नै नयाँ पुस्ताको अदृश्य ब्रा हो।
अदृश्य ब्राले तपाईंको छातीलाई 1-2 कप आकार ठूलो पार्दछ, यसले स्तनको आकार सुधार गर्दछ र सजीलो मोहक नेक्लाइन बनाउँदछ।
छातीको आकार र आकार - यसले तपाईको स्तन, यसको आकार र साइजको जटिलताहरूसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्दछ। नेत्रहीन 1-2 c द्वारा तपाईंको स्तनहरू विस्तार गर्दछupsizes.
यो स्ट्र्यापलेस छ - राती काँधको काँध पट्टिहरू बिर्सनुहोस् र खुला काँधहरू सहित मोहक पोशाकहरूमा हो भन्नुहोस् जुन सबै पुरुषहरूलाई पागल पार्नेछ।
चिलाउने फास्टनरहरू बिना - हामीलाई थाहा छ कि तपाईं तन्काउने पट्टिहरूबाट थकित हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईं उनीहरूको बारेमा बिर्सन सक्नुहुन्छ र तपाईंको सबैभन्दा मनपर्ने र खुला शामको लुगा लगाउन सक्नुहुन्छ!
एक आकार सबै फिट हुन्छ - अदृश्य ब्रा एक आकार आकारमा आउँदछ जुन ठुलो र सानो स्तनहरूको लागि उपयुक्त छ, त्यसैले आकार कुनै मुद्दा होईन।
कालो र नग्न रंग - FlyBra को लागि उपयुक्त रंग छनौट गर्नुहोस्, नग्न, आफ्नो छालाको टोनसँग मिल्न, लुगामुनि लगभग अदृश्य, वा कालो।
टिकाऊ ब्रासिएर - उच्च गुणको जापानी सिलिकॉनबाट बनेको, फ्लाईब्रा सफा गर्न सजिलो छ र आफ्नो टाँसिने गुण ओभरटाइम गुमाउँदैन।
FlyBra को साथ तपाईं आफ्नो मनपर्ने, विलासी र मोहक पोशाक लगाउन सक्नुहुन्छ
यो कुनै पनि महिलाको सपना हो कि पुरुषहरूको आँखामा निष्कलंक देखिन्छ। तर प्राय जसो हामी जटिल र शारीरिक दोषहरूबाट बाधा उत्पन्न गर्दछौं, विशेष गरी स्तनको आकार र आकार जस्ता। ती मध्ये केही बोझिला र असुविधाजनक ब्राको साथ सुधार गर्न सकिन्छ, तर यो प्राय: धेरै राम्रो देखिदैन, र सबै पोशाकहरूमा काम गर्दैन।
गर्मी मा, तपाईं खुला काँध र पछाडि हल्का लुगा लगाउन चाहनुहुन्छ। तर ती ब्रा स्ट्र्यापहरू एकदम डरलाग्दो देखिन्छन् यदि तिनीहरू सिलिकॉनले बनेका छन् भने। गर्मीका पोशाकहरूमा फिट हुन ब्रा उठाउन धेरै गाह्रो छ। त्यहाँ बिक्रीमा धेरै अदृश्य ब्राहरू, साथै सिलिकॉन प्याडहरू थिए, तर तिनीहरूको डिजाइन अपूर्ण थियो, र गुणस्तरीय चिनियाँ उत्पादनहरूले चाहेको जस्तो धेरै छोडे।
जापानी वैज्ञानिकहरूको समूहले फ्रान्सेली फेशन हाउस फ्लाइब्रासँग मिलेर एक नवीनता विकसित गरेको छ जुन अण्डवियर फेसनमा वास्तविक क्रान्ति बन्न पुगेको छ र हजारौं महिलाहरूको जीवनलाई पनि सरल बनाएको छ जसले अदृश्य फ्लाइब्रा छनौट गरे।
यस ब्राले उच्चतम पुरस्कार प्राप्त गर्दछ - सन्तुष्ट ग्राहकहरूको समीक्षा, किनकि यससँग यसको एनालगहरू भन्दा बढि महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू छन्।
अदृश्य ब्राको उच्च गुण। फ्लाइब्रा जापानी सिलिकॉन र फ्रेन्च कपडाबाट बनेको छ, यो निर्बाध छ, कम्तिमा 12 महिनासम्म रहनेछ, निर्माता द्वारा ग्यारेन्टी गरिएको।
फ्लाइब्रा बनाम नक्कली। सस्तो अफरहरूदेखि सावधान रहनुहोस्, व्यापक रूपमा अनलाइन उपलब्ध छ, कम-गुणवत्ता फेकहरू, एनालगहरू र ब्राहरू प्रदान गर्दछ जुन फ्लाइब्रा जस्ता देखिन्छ। सम्भवतः तपाइँलाई एक आईटम पठाइनेछ जुन बाहिर फाल्नु पर्छ।
शिपिंग र भुक्तानी। तपाईं आइटम वेबसाइटमा एक अदृश्य फ्लाईब्रामा अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ, भुक्तानीको साथ जब तपाईं सामान प्राप्त गर्नुहुन्छ र निरीक्षण गर्नुहुन्छ।
नरम र प्लास्टिक कपहरू जुन "छालाको साथ मर्ज गर्नुहोस्"
कपमा धकेल्नुहोस्, तपाईंको स्तनलाई 1-2 आकार ठूलो बनाउँदछ
तपाइँको छाती र dccletleté आकार दिनका लागि अभाव
तपाईंको छाती को आकार सुधार गर्दछ
Hypoallergenic सिलिकॉन जेल छालामा दीर्घ-अवधि अनुप्रयोगको लागि उच्च चिपचिपापनको साथ
हेरचाह गर्न सजिलो, टिकाऊ
धेरै प्रकाश, त्यहाँ तनाव को कुनै भावना छैन, यो तपाइँको चालहरु प्रतिबन्धित छैन।
अदृश्य, सबै भन्दा धेरै लुगा लुगा अन्तर्गत पनि।
Flybra यसको कार्यक्षमता को लागी धन्यवाद आदर्श छाती आकार सिर्जना गर्न को लागी तपाईको वफादार सहयोगी हुनेछ, जबकि अदृश्य रहन। यो आकार निर्धारण गर्न सजिलो छ - जब साइज छनौट गर्दछ, केवल तपाईंको कप आकार (स्तन पूर्णता) लाई ध्यानमा राखिन्छ। सफा गर्न को लागी सजीलो - हटाए पछि साबुनको घोलबाट सतह धुनुहोस् र सुरक्षात्मक फोइलहरूको साथ सुकाउनुहोस्।
FlyBra को ग्राहक समीक्षा - अदृश्य ब्रा:
एउटा ब्रासीयरले अन्य धेरै मोडेलहरू बदल्छ। मसँग एक पटक सिलिकॉन थियो, तर यसको समायोजन थिएन, र जब मैले फ्लाइब्रालाई अनलाइन स्टोरमा देखें, मैले तुरून्त यसको अर्डर गरें। म चिन्तित थिएँ कि यसले मेरो आकारको छाती समात्दैन, तर सबै ठीक छ।
त्यस्तै चिनियाँ ब्राको तुलनामा जुन मैले आदेश दिए पनि एलीएक्सप्रेस, त्यहाँ ध्यानणीय भिन्नता छ, म यसलाई4महिना भन्दा बढी प्रयोग गर्दछु, टाँसिने गुणहरू अझै समान हुन्छन्, म यसलाई सधै लगाएपछि साबुनले धुन्छु। म यसलाई हातले धुन्छु, चिसो पानीमा, र यसको हेराई र रंग गुमाउँदिन।
Kate, बैंक प्रबन्धक
म यो ब्रा को बिक्री को लागी प्रतिक्षा गर्दै थिएँ, र अमेरिका बाट अर्डर गर्न चाहान्छु, तर हिम्मत भएन। चाँडै हाम्रो देश मा बिक्री को रूप मा खोलियो, तुरून्त दुई आदेश दिए: बेज र कालो। पातलो जर्सीमुनि पनि, अदृश्य ब्रा व्यावहारिक रूपमा अदृश्य हुन्छ, र फ्लाइब्राले स्तनहरूको बीचमा एउटा सुन्दर खोक्रो बनाउँदछ।
म फ्लाईब्रा कहाँ अर्डर गर्न सक्छु?
अहिले, FlyBra मा छुट छ 50%! अर्डर गर्न, तपाईंले आधिकारिक वेबसाइटमा जानुपर्नेछ र सम्पर्क फारम भर्नुहोस्। एक व्यवस्थापक तपाईं लाई सम्पर्क गरीन्छ अर्डर पुष्टि गर्न। शुभकामना किनमेल!